Dawooyin Nebigi Maxamed(NNKHA) Isticmaali Jiray | Araweelo News Network
Dawooyin Nebigi Maxamed(NNKHA) Isticmaali Jiray
Dadka qaba macaanka waa in ay ka taxadiraan marka ay malabka cunayaan, sababtoo ah dhiiggu waxa uu malabka u qaata inuu sonkor yahay, gaar ahaan way kala duwan yihiin malabka, tusaale ahaan malabka loo yaqaan Tubeelo (Tupelo) waxa uu ka duwan yahay ka loo yaqaan Leyulose, sababtoo ah qofka macaanka qaba wuu isticmaali karaa noocan.
Malabku waa il dabiici ah oo tamar laga helo, taasoo sidoo kalena ay ku jirto nafaqo aad u faa’iido badan. Sonkortu waa unugyo tamar ah oo jidhku u baahan yahay. Dhammaan kaarboohaydaraydka (Carbohaydrates) hadday kuwo sonkor fudud ah iyo kuwo culus waxa loo jajabiyaa qurbaabo Guluukoos (glucose) amma dhiigga sonkorta raacda (Blood Sugar) ka hor inta aan jidhkeenu isticmaalin, sidaa darteed sonkorta malabka ku jirtaa asal ahaan iyadaaba burbursan oo ah Glucose iyo Fructose, jidhkuna si caadi ah buu u nuuga, kadibna waxa uu ka helaa tamar degdeg ah.
Cilmi-baadhiso dhawaanahan la sameeyey waxa ay soo jeediyeen in sonkorta malabka ku jirtaa ay qofka ka ilaaliso in qofku daalo, gaar ahaan dadka ciyaaraha fudud ciyaara ayaa lagula taliyey in ay isticmalaan.. la soco…